Ndeipi ndiyo inonyanya kukosha Amazon mutengesi zvigadzirwa zvegore rino?
Kubudirira kwenguva yakareba pamusorosoro wokuderedza-kutumira nzvimbo ichagara uchida iwe kuti uve nehupenyu hwakakwana uye kutonga kwezvinhu zvakakosha zvekugadzirwa kwako kwekugadzirwa kwezvinhu zvakadai sekutsvaga, kutengesa, mhinduro, kutengesa, kutengesa, kuwedzera kushandiswa kwezvinhu, etc Uye apa pane mamwe maAmerica anonyanya kutengesa zvishandiso zvevarume venyu kwete kungoita kuti zvinhu zvive nyore asi kuwana ruzivo rwakanyanya pamusoro pemashambadzi enyu ari pedyo. Izvo zvinotevera zvishandiso uye mhando dzemuInternet ndiyo inonyanya kuita. Ndakasarudza kuvanyorera nehupenyu hwavo hwekugona - lemo tank. Ndinotenda kuti vabatsiri ava vari muIndaneti vanofanirwa-kuva nevose vanobudirira big-time seller uko.
10 Best Amazon Seller Tools Iye zvino
Mutengo ndiwo chikamu chikuru mukukwikwidzana kwako, uye nhasi inogara ichichinja iyo inoramba ichinyatsofamba mumakemikari inofanirwa zvechokwadi inoda kutevera zvakasimba uye kuongorora. Ndinokurudzira kushandisa RepricerExpress, nokuti iri chaizvo pakati pezvinonyanya kukosha Amazon mutengesi zvishandiso, kana zvichisvika pakukwikwidzana kwemari. Nechidziro ichi, unogona kuumba nyore uye kugadzirisa maitiro ako epanguva ino uye anogara kwenguva refu. Iwe unogonawo kubatsirwa nemimwe mitemo yepamutambo yakanyanya, sarudza kumusoro uye pasi pechibvumirano maitiro, kusimbisa marita ako anotarisirwa panguva imwe chete. RepricerExpress inogonawo kukuchengetedza nguva yakawanda, zvichienderana nekutengeswa kwakawanda uye zvakadzama kutsvaga kutsvaga, pamwe chete nemamashoni anowanikwa pakushandisa chero shanduko pamitengo yako yezvino pakarepo. Rimwe
Chimwe chisarudzo pakati pezvinonyanya kukosha zvekutengesa ma Amazon mabhuku ekutsvaga mutengo uye kutonga pamusoro pekutengesa kwako kwepamusoro, CamelCamelCamel inogona kutarisa zvishomanana pakutanga. Asi inoshanda zvechokwadi! Chengetedza zvigadziridzo zvemarongerwo emitambo yakajeka uye yakakwana zvakakwana nekuongorora-nguva yekuongorora, maziso, nekuvandudza - ne Chrome browser shanduro iripo pasi pezita raCamelizer ichaita kuti zvinhu zvive nyore.
Mhinduro uye kugutsikana kwevatengi nguva dzose dzave dzakakosha zvikuru zvikamu zvekubudirira kwebhizimisi, asi iye zvino kuva nekuongororwa kubva kune vakawanda vanofambisa vanozove vanoverengerwa nematriyiti emuAmerica. Zvinoreva kuti mutengi kusagutsikana hakugoni kuita kuti zvinhu zvive zvakanyanya kuipa kune bhizinesi rako rekutumira-asi rinogona kuita kuti zvigadzirwa zvako zvigadzike zvakanyanya pasi pezita risingaonekwi nevakawanda vanogona kutenga. Uye pano ndipo apo Feedback Express inouya. Apo zvinosvika pakukurukurirana kwekutaurirana uye automatization, ichokwadi chaizvo kune imwe yepamusoro yeAmerica mutengesi zvishandiso. Izvo hazvingokupi iwe wakangwarira pane zvose zvisingabatsirwi kuongorora vhidhiyo kuitira kuti iwe unogona nguva dzose kuderedza chero zvingaita kuvhiringidzika kwako kuita asi unobatsira zvikuru kana zvasvika pakutumira vengi vako vatengi vachangobva kukumbira nekutaura kwakanaka kuti vakuye kukudzorera kwakanaka.
Nyaya yezvemari inogara ichienderana nekutambisa bhizinesi, kunyanya kudukusa kuenzanisa. Uye mitambo yekutumira-ecommerce mapurisa haisi yekusarudzwa pamusoro apo..Kupa mari kune vese vatengesi Kabbage ndirwo ruponeso rwekuwana mari yakawanda inoshandiswa. Iyi nheyo inotarisa kushanda kwebhizimisi kune mutengesi anoshanda kuti abatsirwe kutora mashoko akatorwa pamisika yakasiyana-siyana kunze kweAmazambique nekutengesa mapurisa kuti ape mhinduro dzakagadzikana dzakagadzikana dzinosangana nezvido zvemahofisi ekuderedza-ehamba uye ecommerce.
Iyi software inogona kubatsira kuita kuti zvinhu zvive nyore nyore kutengesa vatengi mazano zvakananga kubva pazvitoro zvenyu zvekutsvaga uye nekuvaratidza nenzira yakabatana yekubatanidza. ShipWorks iri pakati pezvinonyanya kukosha Amazon mutengesi zvishandiso apo unoda kushanda painvoisi yako pachako, kugadzirirwa kwekubika, maikampu ekutumira email, nezvimwe zvinhu zvakawanda zvakasiyana iwe unogona kuwana zvakakosha zvikuru kuti uve nezvose zviripo mushure mekubudirira kwekutengesa kwekutengesa.
Kana uri kuita mamiriyoni akawanda emakambani ecommerce, CurrenciesDirect inOFANIRA nezvebhizimusi rako rekutsvaga, zvirokwazvo, kana iwe usingadi kukanganwa pamusoro pemhando ipi zvayo inogona kushandiswa nekugadzirisa dzimwe nhamba dzemabhengi emunharaunda. Handizivi sei chaizvoizvo chaiwo ndechokuti nhamba asi maererano achangopfuura kuzivisa vanofungidzira ichi kubhadharwa Optimization chokushandisa anokwanisa kuchengetedza chinhu kunhivi 3% yako mambure zveminda - chete pakubata akavhiyiwa zvakanaka chete chete Exchange uye mari ose zuva.
Ndinokurudzira kusarudza pakati peMerchant Words neGoogle's Keyword Tool sezvo ivo ndivo vakanakisa venguva dzekutengesa Amazon vachienda nenzira inobudirira yebhizimisi ecommerce. Kukubatsira iwe nehuwandu hwekugadzirwa kwezvinhu, Merchant Words keyword tool inosvika mamiriyoni makumi maviri emitauro yakakurumbira yekutsvaga inoshandiswa kuAmazon nokuda kwekutenga zuva nezuva. Kana iri iyo Keyword Tool kuburikidza nekutsvaga kwenyika, inoratidza masimba ayo akasimba zvikuru kunyanya nemashoko ekukosha ezvinyorwa zvakakodzerwa nemazita emiti uye tsanangudzo yemiti.
Kutsvaga zvitsva zvinotengeswa nekutsvaga mikana mitsva yebhizimisi zvikamu zvisingaverengeki zvevatengesi vose vari paIndaneti. Asi unofanira kunzwa kushaya njere pamusoro Prospecting dzenyu mikana bhizimisi pamusoro Amazon, Profit Sourcery anogona kukubatsira rworudyi nhindi pfungwa uye kukuratidzai ndandanda pamusoro vaizotibata zvinogona nzvimbo yenyu chigadzirwa zvinyorwa kusvetukira mukati.
Zvechokwadi, zvingaratidzika seisina-brainer, asi kushandisa shanduro dzakawanda dzemasangano evanhu sepa Facebook ndiyo nzira yakanakisa yekufambisa mamwe magwara ku ecommerce product listings - pasina kuribha penny. Zvose zvaunoda ndeyekutsvaga imwe nguva pakuumba purogiramu yakabatana nebhizimisi. Nenzira iyo, kana iwe wakasika bhizinesi rako rebhizimisi, shandisa zvivako kusimudzira zvigadzirwa zvako uye nguva dzose uri pamusoro pekutsvaga kutsvaga. Chii chinowedzera - kuvaka chivimbo chakasimba pamagariro evanhu nekutumira zuva nezuva uye mabasa ekukurukurirana, unogona kutarisana nevanonyatsoteerera vateereri vangave vatengi.
Refunds Manager pakati chakanakisisa Amazon mutengesi Ezvemutauro kana toreva dzimwe nguva vanongoerekana yokuvamba zvikanganiso kana zvisingatarisirwi unodzokera kubva vatengi Somuenzaniso, nokuda ukama uwandu chero mhando overcharged mari kana , dzakadai sekubhadhara mari, hukuru, uye mari yekurema, pamwe chete nezvimwe zvinokanganisa kana matambudziko anoitika munzira. Shandisa Refunds Manager kuchengeta ose yezvinongoerekana zvichiitika mudambudziko uye kukanganwa nezvazvo dzakazotevera yematambudziko vane refunding zvachose.